Zombie Computer And Botnet malware - Semalt Expert manome ny valiny na tsara na ratsy ho an'ny solosainao izy ireo
Ny solosaina zombie dia fitaovana mifandraika amin'ny aterineto izay atahoran'ny hackers. Mampiasaina ho an'ny asa ratsy sasany ary ny botnets amin'ny zombies dia ampiasaina hanaparitaka spam amin'ny alàlan'ny mailaka. Manomboka ihany koa ny fanafihana an-tserasera. Ny tompon'ny ordinatera zombies dia tsy mahafantatra akory fa ny rafi-pandaminana dia iharan'ny herisetra satria mandamina mangina ireny fandaharana ireny ary manafika antontan-taratasy maro. Ny Frank Abagnale, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny fanafihan'ny DDoS mifandraika amin'ny botnets dia mitovy amin'ny fanafihan'ny horde zombies, ary maro ireo mpampiasa solosaina na finday no tsy mahafantatra ny bots. Ny maloto botneta dia ny fametrahana fitaovana finday maro mifandraika amin'ny aterineto izay mifandray amin'ny aterineto, izay samy mamorona bot rehetra. Ny botnets dia ampiasaina hanatanterahana fanafihana isan-karazany amin'ny fandikan-dalàna, manangona angon-drakitra, mamela ireo mpanafika hiditra ao amin'ny fitaovana, ary handefa mailaka imailaka na rohy fisintonana amin'ny ankabeazany.
Tsy ratsy avokoa ny malware sy ny kintana botnet rehetra:
Tokony hotadidinao fa tsy ny botnets rehetra no manimba sy manimba. Ohatra, ny orinasan-tserasera sasantsasany dia manohy manavao ny politikany amin'ny fanampiana ny botnets ary ny mpampiasa dia tokony hanaraka ny fitsipika sy ny fitsipika. Nohavaozin'ny Microsoft vao haingana ny politikany ary nampidiriny ny botnets rehetra izay mora ampiasaina ary hisorohana ny fanafihana botnets manimba. Noho izany, ny fametrahana ireo botnets eo amin'ny milina dia tsy mampidi-doza mihitsy ary tsy tokony horaisina ho toy izany..Ny botnets dia noforonina rehefa misy programa na viriosy ratsy dia miditra amin'ny fitaovana iray. Ny mpitantana ny botnets dia mitarika hetsika sasantsasany amin'ireo fitaovana maromaro amin'ny alalan'ny fantsona fifandraisana toy ny HTTP sy IRC. Ny botnets dia nokaramain'ireo mpanafika cyber noho ny tanjona samihafa.
Ahoana no hijanonana amin'ny filaminana an-tserasera?
Tokony hametraka programa maimaim-poana anti-malware ianao na antitra izay tokony ho dikan-tsoratra voalohany sy maimaim-poana mba hahazoana antoka kokoa ny fiarovana an-tserasera anao. Ankoatr'izay, tsy tokony hokaravasina na oviana na oviana ny rohy mampiahiahy sy ny doka mamirapiratra ary ny varavarankely popup dia tsy tokony hosokafana satria mety ahitana bots amin'ny ankabeazany.
Plastika an-tapitrisa tapitrisa no voan'ny aretina amin'ny botnets, mamorona tafika bot botiana ary manaparitaka ny mangalatra na manery ny antsipiriany manokana amin'ny Internet. Ny bots sasany dia ahitana tambajotra bitnet kely sy lehibe, toy ny Conficker, Zeus, Mariposa, BredoLab, ary ZeroAccess. Ireo rehetra ireo dia miandry ny didy avy amin'ireo mpandoro zavona talohan'ny hanombohany manatanteraka ny asany.
Ny mpandefitra botnet matetika dia mivarotra ny tolotrasa botnet amin'ireo mpividy tsara indrindra. Ny mpanjifa dia nanao tsindrim-peo ara-barotra ara-barotra, antoko politika ary andian-jiolahy an-tserasera, izay mikendry ny hanakorontana ny fanafihana cyber. Ny fandrahonana botnetana dia singa lehibe amin'ny sehatry ny fiarovana amin'ny aterineto, ary ny botnets dia ao ambadiky ny fanafihana phishing. Noho izany, ny fisorohana azy ireo dia tsy maintsy atao, ary tokony hajanona isika mba hisamboran'ny mpangalatra, ny halatra ary ny fanafihan'ny phishing. Ny ordinatera zombies sy ny malware botnet dia afaka manafika ny fitaovana ampiasainao, noho izany dia tokony hitandrina ianao raha mikaroka tranonkala samihafa Source .